Codbixinta - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Codkaaga wuu tirsanayaa!
Wax kasta oo waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato codeynta
Hubi Codsigayga Wisconsin iyo Isbahaysiga Codbixinta Naafonimada Wisconsin si aad ula socoto macluumaadka muhiimka ah ee codeynta iyo inaad waxbadan ka barato sida loo:
Diiwaan gal si aad u codeyso
Raadi goobta codbixinta ee deegaankaaga
Isbahaysiga Codka Naafada ee WI
Doorashooyinka Soo Socda
Doorashada soo socota:
Doorashada Gu'ga, Talaado, Abriil 5, 2022
Fursadaha Gaadiidka Qiimaha Jaban ama No Qiimaha Codeynta
Raadi macluumaad ku saabsan ikhtiyaarrada gaadiidka ee bilaashka ah ama bilaashka ah ee loogu talagalay deggeneyaasha Degmooyinka Kawnow ee da 'weyn ama naafo ah una baahan caawimaad gaadiid ujeeddooyinka codeynta
Gaadiid ayaa loo heli karaa in lagu tago doorashooyinka maalinta doorashada, maqnaanshaha hore ee maqnaanshaha, diiwaangelinta, ama helitaanka aqoonsi si aad isu diiwaangeliso.
Isbahaysiga Ururada Codbixinta (COVO) ee Degmada Brown WI
COVO waa hay'ad maxalli ah, tabaruce aan xisbi ahayn kana tirsan Degmada Brown, Wisconsin. COVO waxay ka caawisaa cod-bixiyeyaasha diiwaangelinta iyo macluumaadka ku saabsan doorashooyinka soo socda waxayna siisaa RAGO BILAASH ah inta lagu jiro saacadaha hore ee cod-bixinta. Wac 445-8671 si aad jadwal ugu sameysato raacitaankaaga, ugu yaraan hal maalin ka hor waqtiga. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo: www.facebook.com/COVOBCWI/ .
Xiriirinta Daaweynta Gaadiidka
Dadka waayeelka ah iyo dadka waaweyn ee naafada ah ee ka baxsan aagga adeegga taraafikada ee u baahan safar si ay u codeeyaan waxay codsan karaan in khidmadda laga dhaafo ujeeddadaas. Fadlan wac sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad ugu oggolaato qorsheynta adeegga. Wac (920) 227-4273 si aad u qorsheysato raacitaankaaga.
Xuquuqda Naafada Wisconsin (DRW)
Caawinaad ayaa loo heli karaa codbixiyaasha naafada ah. Naafada Xuquuqda Naafada Wisconsin Voter Hotline waxay kaa caawin kartaa su'aalaha codbixinta ama waxay ka caawin kartaa cod-bixiyeyaasha inay soo sheegaan walaac. Khadka qadka ee DRW wuxuu sidoo kale la wadaagi doonaa codbixiyaasha wixii macluumaad ah ee ay ka heleen gaadiidka, marka la heli karo. Kala xiriir khadka qadka ee DRW 844-DIS-VOTE / 844-8683 ama iimayl u dir info@disabilityvote.org.
Transit-ka Green Bay
Kuwa degan Magaalada Green Bay waxay kaqeybqaadan karaan codbixinta maqnaanshaha qof ahaaneed, oo lagu bixiyo Aqalka Dowlada Hoose dhowr maalmood, oo ay kujiraan sabtiyada qaarkood marka basku uxor yahay qof walba Wac (920) 448-3450 ama booqo https://greenbaywi.gov/231/Metro-Transit Wixii macluumaad dheeraad ah.
Isbahaysiga Codka Naafada Wisconsin
Isbahaysiga Codka Naafada ee Wisconsin wuxuu aruurinayaa macluumaadka ku saabsan xulashooyinka gaadiidka ee loogu talagalay cod-bixiyeyaasha naafada ah waxayna soo dhejin doonaan macluumaadka markii la helo. Ka hubi boggooda internetka https://disabilityvote.org/.
Macluumaadka kheyraadka waxaa laga helaa ixtiraamka Xarunta Aging & Disability Resource ee Degmada Brown. Waa la soo saari karaa ilaa iyo inta hay'addu deynteeda hayso oo qaybinta loogu talagalay ujeeddooyin aan ganacsi ahayn oo keliya.
Macluumaadkani ma diidayo awoodda qofku u leeyahay inuu adeegsado ikhtiyaarrada Transit ee Green Bay, Barnaamijka Kaararka Gobolka ee Brown, Iskuxirka Daaweynta ama adeeg kasta oo aan laga soo saarin heerka caadiga ah.
Waa kuma sharci-yaqaanadeyda?
Guji xiriiriyeyaasha hoose si aad u hesho sharci dejiyayaashaada.
Federaalka: Golaha Reps
Maxaa ka dhacaya Dowlada Deegaanka Brown?
Daqiiqadaha iyo Ajandaha
Dhamaan Degmooyinka kale